SAMOTALIS: Shaandheyntii labaad ee xukuumadda.
Shaandheyntii labaad ee xukuumadda.
Date: - 14/03/2015
Markuu Arkay:​Qodobka 90aad, Faqradiisa 2aad ee Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland;
Markuu Tixgeliyey:​Ahmiyadda weyn ay Wasaaraduhu u leeyihiin Dalka iyo dhismaha Qaranka;
Markuu Arkay:​In baahi loo qabo buuxinta jagadaWasiirada Wasaaraddaha Warshadaha, Waxbarashada, Beeraha, iyo Wasiiru-dawlayaashaWasaaraddaha Macdanta iyo Tamarta, iyo Biyaha eeJamhuuriyadda Somaliland;
Markuu Ka Fiirsaday:​Kartidooda, aqoontooda iyo hufnaantooda shaqo;
Markuu ku Qancay:​In ay hanan karaan xilalkanloo magacaabay;
Ku:​Mudane, Cabdi Dirir Cabdi, Guddoomiyihii Hore ee Baanka Dhexe ee JSL​
Ku:​Mudane, Khadar Xasan Xirsi, Guddoomiye Ku-xigeenkii Hore ee Gobolka Hawd ee JSL​
Ku:​Dr. Cismaan Xuseen Warsame, Agaasimihii Hore ee Wasaaradda Caafimaadka​.
Waxaan aad idinku mahadinayaa muddadii aynu soowada shaqaynay. Xilalka Qaranka ayey dabcigeed tahay in ay meerto noqoto oo kolba cid hanan karta loo dhiibo.
Sidaa darteed, waxaan gartay in aan idinka qaado xilalkaGuddoomiyaha Baanka Dhexe, Guddoomiye Ku-xigeenkii Gobolka Hawd iyo Agaasimihii Wasaaradda Caafimaadka ee Jamhuuriyadda Somaliland.